Ogaden News Agency (ONA) – Qeybti 3aad ee Barnaamijki Maxamed Caddow: Ajjo Gudhay Halkey ku danbeysay.
Qeybti 3aad ee Barnaamijki Maxamed Caddow: Ajjo Gudhay Halkey ku danbeysay.
Maxamed Caddow oo ah masulka u qaabilsan TV-ga Aljazeera English geeska Afrika ugaso warama ayaa kasoo diyaariyay dhulka Ogadeniya barnaamijyo aan madax banaaneyn oo uu wareysiyo kagasoo qaaday Horjoogayasha gumeysiga Ethiopia. Hadaba Filimki u danbeeyay ayaa ku aadana arrin in badan shacabka Somalida Ogadeniya isweydinayeen Ururki Al Itixaad ee Ethiopia u gacan galay meesha uu ku danbeeyay.
Barnaamijkan oo xiiso badnaa ayaa Caddow waxa uu soo wareystay rag kamid ahaa Ciidamadi Ururka Al Itaxaad dadka qaarkoodna u yaqaanin Ajjo Gudhay kadib markii ay isu dhiibeen cadowga Gumeysiga Ethiopia masiirki shacabkana ay daba marsadeen waxyaalo shaqsiyadooda u dan ah balse Halganka Ogadeniya sumcad xumo ku ah. Waxaa ururkaas shacabka Ogadeniya ka naxeen markii ay isu dhiibeen Ethiopia.
Hadaba Caddow ayaa soo bandhigay meesha ay ku danbeeyeen Ciidamadi hadda ka hor odhan jiray Mujaahidiin ayaan nahay. Oo eega ku daba faylay ciidamada Liyuu Poliska oo ah kuwa xasuuqa baahsan ka geysta Dhulka Ogadeniya. Ragii mar odhan jiray Jihaad ayaa ku jirnaa oo kalimada Allaah ayaan kor u qaadayna waxay maanta u daggaalamayaan mujrimiin shacabka Xasuuqaysa sida laga sooo daayay SVT Liyuu poliska waa wiilal Somali ah jasad ahaan balse loo abbuuray inay xasuqaan shacabka. Sidaas awgeed Ciidamadi muslimiinta sheegan jiray maanta waxay qeyb ka noqdeen xasuuqa shacab Muslimiin ah oo isdifaaci karin. Iyaga oo ka amar qaadanaya askari Khamrida cabba oo gaal ah cadowna u ah shacabka Somaliyeed.
Ururka al itaxaad ayaa heshiisyada ay la galeen Ethiopia waxaa kamid ahaa in shaqsiyaadki kamid ahaa maamulka Ururkaas lasiiyo lacago ay ku shaqeystaan si xor ahna ay uga ganacsadaan dhulkaas. badilkaasna inay Ethiopia siinayaan Ciidamada Al itaxaad inay ku biirayaan ciidamada Liyuu Poliska si ay ula dagalamaan ururka ONLF. Dhinaca kale inay ka qeyb qaataan Barobagaando ah in in dhulka Ogadeniya nabad ka jirto horumarna laga hirgalinayo iyaga u balan qaaday gumeysiga inay culumada Islaamka ah ee Somaliyeed ay dhulkaas keeni donaan si barobagaankaas loo hirgaliyo.
Ururka Al Itixaad ayaa culumada Islaamka u sheegay inay maslaxada ummada Ogadeniya ka shaqeynayaan oo wax siyaasad ah ka qeyb qaadan doonin. kuna ekaan doonaan fidinta diinta Islaamka. Arintaas oo culumo badan marki hore u bogtay lakiin culumada islaamka ayaa ka digay in haddii ay kusoo caddaato in Al Itaxaad Ciidamadiis daggaalami jiray lagu biiriyo ciidamada Gaalada ah ee xasuuqa ka geysta Ogadeniya ama liyuu poliskaba in ay Diinta masalo khatar ah ka galayaan oo ay lamid noqonayaan gaalada waajibka laga yeelay in lala daggaalo.
Gumeysiga Ethiopia ayaa qorshaha uu kalahaa innu soo dhaweyo is dhiibitaanki Al Itaxaad ay aheyd innu sameeyo dad somali ah oo Dhulka Ogadeniya ku soo kordhiya qalaalaso kale si loo qeybiyo bulshada isku hor imaadyo sokeeyana uga dhacaan dhulkaas Ogadeniya.
Lakiin Jabhada ONLF oo waxaas oo dhan kasii baaran dagtay ayaa ku guulaysatay in ay maareyso xoogaga uu gumeysigu isku dayay in dhulka Ogadneiya uu ka dhiso. Waxaana ku fashilmay iskudaygii cadowga.
Barnaamijka Caddow kasoo diyaariyay Ogadeniya ayuu ku sheegay in illaa Ururka ONLF Ethiopia xal waarta la gaadho in aysan suurto gal u aheyn Ethiopia in wax ka fuliso Ogadeniya.
war aniga waxay ilatahay mohamed adow waxba yaan laataagin
waxbadan buudadaalay hadiiba isaga oo jigjiga jooga uu in taas siidaayay walaahay waa geesi wadan ka dadkii udhashay e siyaasiyiinta ahaa baa waxay doonaan aan sheegi karin markay joogaan halkaa lkn isbarbar dhuig badan buus amee yay in kaas dadka reerogadeeniya way jecel yihiine yaan waxba laga sheegin warbaahinta j.w.x.o taageerta ha ilaaliyaan inta laga arkayo xaaladiisa dhabta ah
waan u hanbalyaynayaa mudane caddow waa nin aadiyo ad u jecelnahay hadaann nahay shacabka Ogadeniyaa.
Barnaamijka uu soo daayey kuma farxin…Horumar makajiro dhulkena xasuuq ayaa kajira.
Liyuu Poliskana dadka ayay gumadaan..sida caddow ku shegayba waa mujrimiin…
Caddow waan jecelnahay waana taagersanahay.
Aljazeera iyo caddowba waxaan ka codsanayna inay wariyaashi laso dayay wareystaan…
Marka hore way iskacadahay in cadow iyo guumaysiga xidhiidh dhexmaray wallow ay dhici karto sidaan qabo in uu isagu ugadanlahaa inuu nimankaas access u hello si ay saxaafad ahaan ugu noqoto in uu labada dhinacba waraysi kaqaaday takale hadii uusan dadaalayn ma uusan waraysteen HRW, Balse arinta meeshan kasoo baxaysa ayaa waxa ay tahay sida aan anigu qabo in uusan cabdi illay ahayn qofka isaga la xidhiidhay ee ay xaga addis ababa tahay ujeedada ay kalahaayeena ay ahayd oo kaliya in ay caalamka tusaan inuu cabdi illay yahay ninka masuulka ka ah waxyaabaha dhaca oo dhan maadaama uu cadow leeyahay waa ninkan ninka ciidankan aas aasay isagaana toos u xukuma oo ay ka amar qaataan taasina waxaan u arkaa inay gogol xaadh u tahay jabka ay cabdi illay lamaaganyihiin oo ah inay isaga isku furdaamiyaan ama kulugbaxaan sida eraygaas oo ah mid uu cabdi illay laftiisu sameeyay oo uu macnihiisu yahay isku furdaamin kkkk
Aniga waxaan dhihilaha Dhamaar Wariyayasha ama Qorayasha Webka In aay Ka Fiirsadaan runtii inta aay wax soo qorin and i hope Mohamed Adow waxa uu sameyey in aay tahay dadal uun lakin wax kale uu san jirin wayo hadii uu galada la shaqeynayo Muna so cadeyey Ajjagudi iyo Liyo Police labadaba Iyo Abdi Ubo muu war ka kenen iin Wariyada Halgamaga canka ah halaga fiirsado inta aan la dacayadeynin baan oran laha runtii
Aljazeera wax badan ayay Ogadeniya u qabatay…
Cadowna waa nin jabhada waxaan ka wada halganka qeyb ayuu kaga jira. Waa u duceynayna. Ogadennet fikradaha kala gadisan ee shacabkeena inay soo qataan oo ay tusaan shacabka in caddow qalad weyn sameyn waaa uga mahad celinaya. Filimada markaan daawaday ogaden net iyo ogaden today ayaa iga shaki bixiyay.
Caddow dadka yaqana hala hadlaan haloo sheego innu dhexdhexaad noqdo. oo uusan soo duubin wax uusan ku qanac saneyn,
maxamed caddow hal eray ayaan wax qalad lagu sheegi karo ka haynaaa waana hadalka oran haya “liyu Police ayaa xilka kalawareegay ciidamada Ethiopia ” hadalkaasna xaq ayaan uleenahay haddaan nahay shacbiga Ogadenia in aan Ogaanno waxa wariye caalami ah beenta intaas dhan kukalifaysa waana su aal taagan?? lkn aniga aragtidayda wali wax aan kudacaayadayno iima muuqdaaan!!! aad ayaan usalaamayaaa wariyayaasheenna ONA